Wasaaradda Maaliyadda Puntland iyo Madaxda gobolka Bari oo go’aano kasoo saaray Shilling Soomaaliga[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
Wasaaradda Maaliyadda Puntland iyo Madaxda gobolka Bari oo go’aano kasoo saaray Shilling Soomaaliga[Sawirro]
August 4, 2017	in Warka
Kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Puntland Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ,Maamulka gobolka Bari,kan Boosaaso iyo ayaa waxa ay go’aan kaga gaareen Isticmaalka lacagta Shilling Soomaaliga.
Kulanka oo socday saacado ayaa lagu go’aamiyey arrimo badan oo ay kamid yihiin lacagta la qaadan karo,sarifka lacagaha qalaad iyo arrimo kale oo isla lacagta ku saabsan.
Waxaana ugu dambeyn kulanka laga soo saaray qodobo ay kamid yihiin:
In dowladu ay qaadan doonto lacagaha Shilling Soomaaliga gaar ahaana kuwa cusub ,lagana tagayo kuwa go go’an iyo sidoo kale kuwa duugga ah.
In Halkii dollar aan laga badin karin 28-kun oo shilling Soomaali ah.
In Sariflayaasha Boosaaso loo sameeyo sharci ay ku shaqeeyaan.
Duqa degmada Boosaaso Eng Yaasiin Mire Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka Boosaaso iney joojiyaan Mudaharaadka isla markaana ka shaqeeyaan nabadgelyada.
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays(Dhado) ayaa sheegay in cashuurta ay ku qaadayaan lacagta cusub oo keliya isla markaana aysan qaadan doonin lacagihii hore ee Shilling Soomaaliga gaar ahaana kuwooda duugga ah.
Waxa uu sheegay in wixii maanta ka dambeeya aysan aqoonsanayn sarifle loogana baahan yahay iney sameystaan aqoonsiyo.
Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Puntland Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan ayaa sheegay iney ka shaqeynayso dowladu sidii wax looga qaban lahaa lacagaha soo galaya dalka,wuxuuna sheegay in garab taagan yihiin bulshada reer Puntland.
Madaxda Cusub ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo hortagay Baarlamaanka[Sawirro]
Wasiirka Maaliyadda Puntland Dr Cabdulaahi Sheekh Axmed oo dhisme cusub ka dhagax dhigay Tukaraq[Sawirro]
News Post Archives Select Month June 2022 (11) May 2022 (8) April 2022 (9) March 2022 (6) February 2022 (9) January 2022 (6) December 2021 (8) November 2021 (14) October 2021 (14) September 2021 (9) August 2021 (13) July 2021 (5) June 2021 (14) May 2021 (9) April 2021 (2) March 2021 (2) February 2021 (2) January 2021 (12) December 2020 (4) November 2020 (18) October 2020 (13) August 2020 (2) July 2020 (1) June 2020 (1) March 2020 (2) February 2020 (1) January 2020 (9) December 2019 (15) November 2019 (22) October 2019 (20) September 2019 (14) August 2019 (13) July 2019 (15) June 2019 (15) May 2019 (9) April 2019 (26) March 2019 (17) February 2019 (13) January 2019 (1) December 2018 (2) October 2018 (5) September 2018 (8) August 2018 (2) July 2018 (8) June 2018 (2) May 2018 (4) April 2018 (3) March 2018 (10) February 2018 (1) January 2018 (3) December 2017 (13) November 2017 (5) October 2017 (3) September 2017 (16) August 2017 (8) July 2017 (5) June 2017 (7) May 2017 (1) April 2017 (3) March 2017 (3) February 2017 (3) January 2017 (5) December 2016 (5) November 2016 (6) October 2016 (5) September 2016 (3) August 2016 (3) July 2016 (3) June 2016 (3) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (9) February 2016 (4) January 2016 (4) December 2015 (5) November 2015 (2) October 2015 (4) September 2015 (2) August 2015 (4) July 2015 (1) April 2015 (1)